Iza No Hieritreritra Fa Any Kazakhstan Ny “Everest”? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Janoary 2016 16:12 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Català, русский, Français, Italiano, Deutsch, English
Araka izay aseho amin'ny “20110810 Tavany Avaratry Midadasiky Ny Everest Tibet China” no tena Everest, araka ny mpampiasa: Ggia – Own work. Nampiasàna ny fahazoandàlana CC BY-SA 3.0 via Commons.
Tsy ny zava-drehetra mikasika ny horonantsary no mila fandaniana tetibola. Milaza ny fanambaràna iray vao haingana mikasika ny sarimihetsika Everest fa tsy dia ilàna refy ara-jeografika tena marina ny dokambarotra atao peta-drindrina.
Vao haingana, nitatitra ny vavahadim-baovao Rosiana iray malaza Tjournal.ru fa ny peta-drindrina dokambarotra mikasika ny Everest, horonantsary iray mikasika ny tantara marina momba ny fiakaran'ny iraka iray voaozona ho eny antampon'izao tontolo izao dia nanasongadina sary iray an'i Kazakstan nalain'i Peak Chapaev – fa tsy ny tendrombohitra Everest.
Feonkiran'ny horonantsary #EverestMovie manasongadina an'i Dario Marianelli ilay nahazo ny Oscar, avy amin'ny Varese Sarabande Records
Araka ny tatitra, i Alexander Zyryanov avy ao Kazakstan no naka ny sary, mpihanika tendrombohitra sady mpankafy maka sary izay nilaza tamin'ny Tjournal fa izy no nivarotra 62,50 Dolara ilay sary tamin'ny Shutterstock .
Toy ny tsy tezitra i Zyryanov:
Rehefa monina ao Almaty [tanàna lehibe indrindra ao Kazakhstan] ianao, tsara ny mihanika ny tendrombohitra. Tena mahafinaritra eny antendrombohitra ary maka sary io hatsarantarehy io ireo izay mandeha eny. Anisan'izany aho. Manandrana maka sary meva aho. Manana fakantsary reflex tranainy koa aho, Nikon D70 – tena mavesatra, angamba. Nalaina tamina haavo efa ho 6,500 metatra ambonin'ny ranomasina io sary io.
Ary ilay tendrombohitra azo sary tamin'ny Nikon D70-ny? Peak Chapaev eo amin'ny tandavan'i Tien-Shan, fivakisana iray amin'ny tandavana Himalaya lehibe izay mikisaka manaraka an'i Kazakstàna, Kyrgyzstàna sy mankany Shina ary Ozbekistànà. Ao amin'ny tandavan-tendrombohitr'i Mahalangur ao Nepal sy Tibet no ahitàna ny tendrombohitr'i Everest.
Anarana tsy dia misongadina kokoa ny Chapaev raha miohatra amin'ny Everest, saingy sahala amin'ireo tendrombohitra rehetra ao anatin'ny Azia Afovoany kominista teo aloha, mbola tsara fàka sary kokoa izy.
Taorian'ilay famborahana, niditra tamn'ny media sosialy miaraka amin'ireo sosokeviny ny mponina ao Kazakstàna mba hampiasa ny sary ho toy ny marika mambabo fo fampielezankevitra an'ny fireneny miaraka amin'ny teny faneva mavesatra hoe “tsara noho i Everest”.
Misy esoeso manao vato moha-riana mifangaro amin'ny hatsikana, na izany aza.
Na eo aza ny totlo mifanaraka tsara afaka handrehetana ny fafàna Volafotsy, tsy mahamaika akory an'i Hollywood ny hanao ilay faritra ho toerana mahatalanjona fakàna horonantsary ato anatin'ny hoavy tsy hoe ela.
Tsy toa an'i Mongolia, izay toa mitalaho angolangola iray ny anarany mba hamenoana ny elanelan-tany, mivoy haizim-pito iray tsy ahitàna soritra tantaram-pitiavana na kely aza ny “Stans” .
Midadasika Kazakhstan, raha mbola tsy voafidy ho toerana fandraketana an-tsary ho anà famoahana manan-danja iray amin'ny teny anglisy, dia toerana noforonina ho anà horonantsary vitsivitsy, izay tsy misy amin'ireo akory no mba nanampy ireo ezaka tsy nitandroan'ny governemanta hasasarana hanefena marika miabo iraisam-pirenena.
Anisan'izany ny Air Force One nahalafosana tapakila betsaka tamin'ny 1997, izay fotoana niainan'ny firenena teo ambany fanaraha-mason'ny fitondrana miaramila jiolahimboto arovan'ireo fitaovam-piadiana nokleary nangalarina, sy ny taona 2002 famerenana namokatra ny Rollerball tamin'ny taona 1970, potiky ny tsikera manimba zavatra nataon'ny mpitsikera iray hoe toy ny “korontanana ambony ambany, ampahanà sarmihetsika mikaroka izay ho làlan-kizorana, dika, famindra sy hevitra”
Ho an'ireo mpaniratsira maro, hiaraka mandrakizay amin'ny Borat, firaketana eso an'i Sacha Baron-Cohen, tamin'ny 2006 ny firenena, izay raha “mikasika” ny firenen'i Azia Afovoany amin'ny endriny tena maningana sy hevitra manesoeso, dia efa noraketina an-tsary tao Romania raha ny marina.
Raha vao manokatra resaka amin'ny olona iray avy any Kazakhstànaianao, adinoy ny hoe efa nahita azy io ianao.
11 ora izayAzerbaijan